Soomaaliya, 12 March 2019
Mareykanka oo xaqiijiyey weerarkii Daarasalaam
Ciidamada milatariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey in xalay ay duqyan ka gaysteen degaanka Daarasalaam ee u dhow magaalada Awdheegle, iyaga oo gacan siinayey cidiamada Soomaalida oo ay soo weerareen maleeshiyada Al-Shabaab.
Weerar iyo duqeyn lagu qaaday Shabaab
Ciidamada Danab ee Soomaaliya oo taageero ka helaya diyaarado Mareykan ah ayaa weeraray xalay saldhig ay Shabaab ku lahaayeen tuulada Daarusalaam ee Sh/Hoose.
Galka Baarista: Badqabka hawada Soomaaliya
Midowga Yurub oo mashruuc ka billaabaya Jubaland
Midowga Yurub ayaa lagu wadaa inuu maalinta berri ah uu magaalada Kismaayo ku daah furo mashruuc ku kacaya 83 milyan oo Euro.
Wareysi: Ehellada Soomaalidii ku dhimatay diyaaradda Ethiopian
Waxaa soo baxaya in dad door ah oo Soomaali asalkoodu yahay balse watay baasabooro kala duwan ay ku dhinteen diyaaradda.
Buug: Mullah Omar wuxuu ku ag noola saldhigga ciidamada Mareykanka
Aas-aasaha ururka Taliban Mullah Cumar ayaa sanado badan ku noolaa meel masaafo kooban oo socod ah un u jirta saldhigyada ciidamada Mareykanka,.
Wararkii Ugu Dambeeyay ee Burburkii Dayuuraddii Ethiopian Airline
Shirkada Ethiopian Airlines ayaa bilowdey baaritaanka ay ku sameyneyso shilkii ay shaley ku bur burtey mid ka mida diyaaradeheeda oo ay ku dhinteen 157 qof oo saaraa, kuwaa oo ka soo kala jeeday 33 dal.
Warbixin: Xiisadda Hadaladii Ilhaan Cumar
Xiisad siyaasadeed ayaa ka ooganahay hadallo ay horey iyo dhawaanba u jeedisay Ilhaan Cumar oo ah gabar Somaali Mareykan ah oo Aqalka Hoose ee Kongareeska Mareykanka ka tirsan.
Koox reer Syria ah ayaa dibad bax ka oogay magaalada Darcaa Axaddii shalay, kaasoo ay uga soo horjeedeen taagista taalo cusub oo Madaxweyihiii hore ee dalkaasi Xaafid Al-Asad ah
SOMALILAND: Xuska Maalinta Haweenka
Wasiirka Wasaaradda Shaqagelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska ee Somaliland Marwo Hindi Jaamac Gaani, oo ka hadashay doorka siyaasadda ee Haweenka Somaliland iyo duruufaha heysta.
Puntland: Xuska Maalinta Haweenka
Puntland xus loo sameeyay Maalintan Haweenka ayaa Madaxweynaheeda Saciid Cabdullahai Deni oo ka qeybgalay waxa uu ka hadlay amaanka iyo dumar uu sheegay inay argagixisada la shaqeeyaan